Penile Implant ခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရာများ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဧပြီလ 8, 2021 ဧပြီလ 7, 2021 ဂျက် Kewell ဘ‌‌လော့ခ်, အသားပေးသတင်းများ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
လူနာ ၈၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
Penile implants များသည်လျှို့ဝှက်ထားရန်ပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, နောက်ကြောင်းပြန်မလှည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ကိုအရှက်ကွဲခြင်း / အပြစ်ရှိတယ်ခံစားချက်တွေကိုနဲ့ဆက်စပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ် ဦး သည်ပုဂိ်္ဂုလ်အားနည်းချက်နှင့်အတူမနေရပါ။ သို့သော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတွင်တိုးတက်မှုသည် ED အတွက်ထိရောက်သောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုသေချာစေသောအပြုသဘောဆောင်သောကုသမှုပုံစံများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Penile implant ခွဲစိတ်မှုသည် ED အတွက်အောင်မြင်သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကုသမှုအဖြစ်မှတ်ယူသည်။
ဒီမှာ penile implant အကြောင်းသိထားသင့်တာအားလုံး
ထိန်းချုပ်ထားသောဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူနောက်ကြောင်းပြန်မလှည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားခွဲစိတ်ကုသရန်ကောင်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ကြသည်။
Penile Implant ဆိုတာဘာလဲ
၎င်းသည်လူတို့တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ implants နီးပါးသဘာဝစိုက်ထူတွေ့ကြုံခံစားရန် ED လူနာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အခြားကုစားနည်းများမအောင်မြင်မှသာအကြံပြုသည်။
Penile Implant ခွဲစိတ်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သောလျှောက်ထားသူ
အောက်ပါပြissuesနာများရှိအမျိုးသားများအားအများအားဖြင့်အကြံပြုပါသည် penile implants ခွဲစိတ်ကုသမှု:
- မပြောင်းလဲနိုင်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံစားနေရသောအမျိုးသားများ။
- အဆုတ်သို့မဟုတ်ဆီးလမ်းကြောင်းကူးစက်ခြင်းမရှိသောနောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်နိုင်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။
- မပြောင်းလဲနိုင်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ထိန်းချုပ်ထားသောဆီးချိုရောဂါ.
- erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုနည်းလမ်းအားလုံးသည်အလုပ်မဖြစ်ပါ။
Penile implants အမျိုးအစားများ
Inflatable Implants - လူနာရဲ့လိုအပ်ချက်အရဖောင်းပွနိုင်ပါတယ်။
Semirigid Rods - ခိုင်မာသော penile implant သည်အရွယ်အစားတူညီပြီး semi-hard position ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဘာကြောင့် Penile Implant?
ဤခွဲစိတ်ကုသမှုကိုနောက်ဆုံးအရင်းအမြစ်အဖြစ်သာအကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်လူနာ၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အတိတ်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေများပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ ဒါဟာအရေးကြီးတယ် ဆရာဝန်၏အကြံပြုချက်ကိုယူပါ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။
ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ဆရာဝန်ကသင့်အားညွှန်ကြားချက်များပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာနေရာနှင့်ပန့်ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းများပါ ၀ င်သည်။ လူနာအများစုသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှကြာအောင်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်လိုအပ်သည်။ ရောဂါကူးစက်မှုကိုလျှော့ချရန်ပibိဇီဝဆေးများကိုများသောအားဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
လူနာအများစုသည်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအလုပ်ပြန်ဆင်းနိုင်သည်။ သို့သော်အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာနိုင်သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်အတွက် ၄ ပတ်မှ ၆ ပတ်အကြားကြာပါသည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ ၉၀-၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသောထိုးဖောက်နိုင်သော penile implants ခွဲစိတ်မှု၏အောင်မြင်မှုနှုန်းသည် ဆိုလိုသည်မှာခွဲစိတ်ကုသမှုသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်လုံလောက်သောလူနာများအကြားတွင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လူနာ ၈၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
လူနာခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကျေနပ်ဖွယ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခွင့်ပြုသည့်သဘာဝစိုက်ထူမှုကိုတုပရန် Penile implants များကိုပြုလုပ်သည်။ ဤအရာသည်လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းကိုခဲယဉ်းစေသည်။ အဆိုပါ implants အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်အာရုံခံစားရတယ်။
လူနာခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကျေနပ်ဖွယ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခွင့်ပြုသည့်သဘာဝစိုက်ထူမှုကိုတုပရန် Penile implants များကိုပြုလုပ်သည်။
မည်သည့်ခွဲစိတ်မှုမျိုးမဆိုကဲ့သို့ပင်၊ penile implantation သည်အောက်ပါအန္တရာယ်များနှင့်လည်းဆက်စပ်သည်။
- ရောဂါကူးစက်မှု (ဆီးချိုရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ်ကျောရိုးဒဏ်ရာရှိသည့်လူနာများအကြားဖြစ်လေ့ရှိသည်)
- implants စုပ်စက် / ရေလှောင်ကန်၏ရွှေ့ပြောင်းခံရ
- တိုက်စားခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်အခြားခွဲစိတ်ကုသရန်တောင်းဆိုသည့်တိုက်စားခြင်း / ကော်
အကယ်၍ သင်သည် ED အတွက်တိကျသောဆေးကုသမှုအတွက်တိကျမှန်ကန်မှုရှိမရှိသိရှိပါကအာမခံသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလုံးလုံးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်သည်အချက်များကျယ်ပြန့်စွာပေါ်မူတည်သည်။
- implants အမျိုးအစား
အကယ်၍ သင့်တွင်အာမခံလွှမ်းခြုံမှုမရှိပါကဆရာ ၀ န်ကကိုယ်တိုင်ပေးချေရန်အစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သင်ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းချက်တောင်းခံပြီးခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီသင်၏အာမခံနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံပေးသူအများစုသည်ဘဏ္mattersာရေးကိစ္စများကိုလမ်းညွှန်ရန်အတွက်အာမခံအထူးကု၏အကူအညီကိုတောင်းခံကြသည်။
Penile implants များသည်လျှို့ဝှက်ထားရန်ပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းစဉ်အတွင်းစိုက်ထူနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ အခြားကုထုံးအားလုံးသည်ရလဒ်ထွက်ပေါ်ရန်ပျက်ကွက်ပါကဆရာဝန်များကယင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အကြံပြုသည်။
အများပိုင်သတင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု implants ခွဲစိတ်ကုသခြင်း